WAX MATARE WAXTAR KA HADLAYA
Walaalayaal waxaan doonayaa in aan qoraalkan kula hadlo ninka isku magacaabay C/waxid oo shaqada ka dhigtay dabagalka iyo wax ka sheega hal deegaan oo keli ah, iyo maamul gooni ah isaga oo indhaha ka roganaya waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya oo ay ugu dambeeysey in isaga iyo kuwo lamid ahba lagu eedeeyey in ay dameero cuneen. Horta cabdiwaxid haku baraarugo in uu aduun halkaa ka joogo.
Walaalayaal waxaa iga yaabshay sida qaldan oo uu cabdiwaxid wax uga tarjumo, isaga oo haba yaraatee wax walba oo wanaag ah ay laabtiisu dhibeyso, jecelna hadal kastaa oo waxtar leh in uu xumaan u fasirto, in leyn qofba waxa ka buuxa ayaa ka xoog batee. Ma wadaadbaa ninku? Maya sababtoo ah jaq-jaqda badan iyo qof walbaa oo laga daba hadlo ma aha asluub iyo dhaqan nin xitaa diinta wax ka yaqaan lagu yaqaan.
Hadaad u fiirsato asxaabtu iyaga oo og waxa la weydiinayo jawaabteeda ayeey dhaqan wanaag u deyn jireen nebigeen NNKH jawaabta, taasina waxaa ay ku tusineysaa in hadalka la kala leeyahay, oo qofba waxa uu aqoonta u leeyahay ay tahay in lagu sharfo, laguna ixtiraamo. Waxaa kaloo dhacdaa in ay asxaabtu dhaqankaa aanu soo carababnay ay inagu barayeen in marka hore waxla hubsado, oo aanan jawaabta lala soo ordin.
Waxaa hadaba iga yaabshay qoraal uu sheegay in uu si deg deg ah usoo qoray oo weliba uu sheegay in uu qoray isaga oo kii kale dul fadhiya, oo aanan weliba ka baaraan degin, una fiirsan macnaha dhabta ah. Waxaan weligeey moodi jiray in uu yahay nin qoraaladiisa ka fiirsada oo weliba aad uga baaraan daga. Waxaan weligeey is weydiin jiray ninka London degen oo hadana intaa oo waqti ah u haya qoraalada iska batay ee somalitalk.com ka buuxa, sida uu isu asiibsho waqtigiisa shaqada ama waxbarashada, iyo qoraalada uu qoro.
Maalin baad wax ogaataaye inleyn waa ninkan is sheegay oo deg dega wax ku qora, fudeydka iyo hubsasho la’aantuna ay hagto. Waxaan qoraalkeygan ku bilaabay waxmatare waxtar ka hadlaya, waxaan saa u leeyahay cabdiwaxid kuma haboona ka fekerka iyo waxtarka wadanka, oo xitaa kuma fiicna waxbixinta xiliga la doonayo in wax loo qabto deegaamada uu ka soo jeedo, oo waxtar u baahan [reserve area].
Waa nin ka adag in u udad badan soo xareeysto afkana kala furto isaga oo loogu soo sheeko tago xanta iyo caayda dadka aanan la joogin, una arka in ay tahay mid lagu kasban karo gacal badan iyo saaxiibo, waxaase xaqiiq ah in uu joogay goob lagu kala dhintay, uusan ogeyna meel lagu heshiiyey.
Waxaan aad ugu farxay war ay BBC-du sii deysay oo ka hadlayey dhaqan xumida ka jirta Puntland oo maamulku uu donayey in uu wax ka qabto. Arintaa waa howlaha looga baahnaa dadka aqoonta u leh hase ahaatee ninka doonidii uu nebigu sheegay ku jira, doonayana in uu geestiisa dalooshado, waxaa ay ila tahay gacan qabasho mooyee caqli lagu sii daayo in uusan laheyn.
Hadaan idiin cadeeyo in waxa uu Cabdiwaxid ka hadlayo ayan aheyn diin iyo wax wanaajin, waxaad u fiirsataa the last ten articles, intuba waxaa ay ka hadlyaan dad gaar ah iyo dhul gaar ah, qofka iimaanka islaamiga ah lehna laguma yaqaan in u udad gaar ah iska naco, wax walbaa oo xun baa dhib u ah, taasina waxaa daliil u ah in qalbigiisa iyo afkiisuba ay ku xiran yihiin meel qura, oo ayan ka weecasho aqoon.
Ninku ma ilbax baa? Maya taasna waxaa daliil u ah qofka xitaa dhaqanka suuban wax ka yaqaan lagama yaabo in uu cid walbaa u jawaabo isaga, oo uu noqdo idaacad shidan oo ay cid walbaa dhageysato mid fahma iyo mid aanan fahminba. Waxaa qofka ilbaxa ah lagu gartaa in uu raadsado hadalka meesha uu ka leeyahay, laguma yaqaan in uu meel walbaa ka cantuugo hadalka, fartuna mar walbaa u taagan tahay.
Waxaan ka xumahay in aanan soo koobi karin qoraalkan waxa aam ka aruurshay ninkaas cabdiwaxid layiraahdo oo qaladaad ah, hase ahaatee waxaa waan tooba dhago wax maqla, caqligooduna ku saacido kala garshada hadalka saxa ah iyo kan qaldan.
Faafin: SomaliTalk.com | Oct 10, 2003